Ukubalwa kweMonte Cristo: Uphononongo, amanqaku kunye nezinto ezinomdla - Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Uphengululo kunye neNqaku >> Ubalo lweMonte Cristo
Ukubala kweMonte Cristo ngu-Alexander Dumas (utata) Yileveli endikhe ndayifunda amaxesha amaninzi. Eli lixesha lesihlanu kwiminyaka engama-30 kwaye ixesha ngalinye lindishiya ndinencasa eyahlukileyo emlonyeni wam, endibona ngayo ukuba nditshintsha njani kwaye nobuntu bam nendlela yam yokucinga itshintsha njani.
Ushicilelo lowe-1968, ilifa losapho. Ndihlala ndifunda lo mqulu, lowo unezithombe, kuba ndandimncinci, kwaye ukongeza kwimbali ndiyakuthanda ukufunda olu hlelo lundikhumbuza ngawo onke amaxesha endikhe ndayifunda. Yi IiRodegar editions ngenguqulelo kaJavier Costa Clavell kunye no-Barrera Soligro
Ukusekwa kwinkulungwane ye-1815, inoveli iqala ngo-XNUMX. Ukuba awuyazi, libali lokuziphindezela. UTSHINTSHO. Enye ye ezakudala kakhulu kuncwadi lwehlabathi.
Ukuba awufuni kwazi nto malunga nomsebenzi ngaphambi kokuwufunda, musa ukufunda eli candelo. Van SPOILERS
U-Edmundo Dantes, ngumfana onebhongo, ozithembileyo, obekekileyo nophumeleleyo, oza kutshata aze amiselwe ukuba abe ngumthetheli. Oku kuphakamisa umona kwabanye abamelwane kwaye ungcatshwa ukuze amenze anyamalale ngabalinganiswa abohlukeneyo. Uthotho lweentlekele eziye zadibana ukuze ziphele zizike.
Uya kuvalelwa kwiNqaba ye-If, apho uya kudibana no-Abbe Faria, oya kukuyalela kwaye akuxelele ngemfihlelo yobuncwane obukhulu. kwaye ukusuka apha ukuya phambili, yonke into ebomini bakhe ijikeleza kwiMpindezelo yamadoda abutshabalalise ubomi bakhe.
Yonke into ihamba, yonke into icingelwa. Yonke into ikhohlakele. Siso isiphelo esigwebela zonke iindlela zokutshabalalisa lowo umonileyo.
- Ukuba indoda yenza ukuba uyihlo, umama wakho, iqabane lakho lisweleke ngentuthumbo engapheliyo engapheliyo, ngaba uya kukholelwa ukuba ukulungiswa koluntu kukunika ngokwaneleyo into yokuba i-guillotine blade idlulile phakathi kwesiseko se-occiput kunye ne-occiput. izihlunu zentamo yomntu onetyala, zomntu okwenze wabandezeleka iminyaka kwaye oye wabandezeleka nje imizuzwana embalwa yentlungu yomzimba?
Ukunika ubulungisa, ubomi nokufa ngokungathi unguthixo. Ade aqonde amandla akhe awafumeneyo nokuqwalasela izenzo zakhe.
UAbbe Faria, umenzi
I-abbe Faria, ngumdlali wesibini kumdlalo, lowo u-Edmundo Dantés adibana naye ekuvalelweni kwakhe kwinqaba ye-If. Indoda esisilumko eya kumqeqesha neyasebenzisa ubuchule bayo ukuze ikwazi ukuzilungiselela yonke into eyayiyidinga.
"Kodwa, ngaphandle kweepeni, ungayibhala njani incwadi ebaluleke kangaka?"
- Ndizenze nge-cartilage yezo hakes ezisinika ukutya ngamanye amaxesha.
-Ngaphambi kokuba kubekho indawo yomlilo emhadini wam. Bayigquma kungekudala ngaphambi kokuba banditshixe apho. Kodwa ekubeni umlilo ubuvutha apho kangangeminyaka, wawugqunywe luthuthu. Ndiyinyibilikisa loo soti kwiwayini encinci, uhlobo abasinika lona ngeeCawe, kwaye ndifumana i-inki egqwesileyo. Kumanqaku afanele ukugqanyiswa, ndihlaba iminwe yam ngephini ndibhale ngegazi lam.
Ngale ngqiqo sinokuyiqwalasela a umenzi, ngamandla, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo ubuchule nokuzimisela kwakhe kusikhumbuza kakhulu umoya esiwucingelayo kubenzi.
Kokokuqala kokufunda oku-5 okuthe qatha engqondweni.
Inqaba ye-If kunye neSiqithi saseMontecristo
Kwiindawo ezahlukeneyo zomsebenzi kukho i-2 ephuma kuyo yonke indawo, inqaba ye-If kunye nesiqithi saseMontecristo. Kwaye ukuba. i-2 ikhona.
Island kunye Castle of Ukuba
YeyaseFransi. Inqaba yayo yinqaba eyakhiwe phakathi kwe-1525 kunye ne-1527.
ibiyimeko yeenoveli ezahlukeneyo ukongeza kwekaDumas. Umzekelo, uMntu okwi-Iron Mask uvalelwe kule nqaba, kodwa yintsomi, oku akuyonyani, nangona beyibeke ngolo hlobo.
YeyaseItali, ngakumbi eTuscany. Sisiqithi esincinci se-10,39 km². Sisiqithi esingahlali bantu kwaye sibhengezwe indawo yokuzingela yendalo kwaye sinokutyelelwa kuphela ngemvume. Ayikho kwindawo enye abacaphula kuyo kwinoveli. Ngokwenene ikufuphi neCorsica kunye nesiqithi sase-Elba.
Kwinoveli kuyilungiselelo elibalulekileyo kuba kulapho ubuncwane beCardinal Spada bufakwe khona kwaye kuvumela u-Edmundo Dantes ukuba athathe ubuntu bakhe obutsha kwaye aqalise ukuziphindezela.
Umdla wokubhala ngesandla sasekhohlo
Umdla wokuba ndijonge kwaye ndikushiyele umfanekiso. Ngaxa lithile kwinoveli bacaphula oku kulandelayo
Oku kungenxa yokuba loo leta yayibhalwe ngesandla sasekhohlo. Bendisoloko ndiphawula ukuba oonobumba ababhalwe ngesandla sasekhohlo bafana ngokuphawulekayo omnye komnye.
Ngaba bonke oonobumba abasekhohlo bayafana ngokwenene? oko kukuthi, abasekunene ababhala ngasekhohlo.
izigaba Uphengululo kunye neNqaku Ukuhamba kwetikiti
Izimvo ezi-2 kwi "Count of Monte Cristo"
Okthobha 23, 2021 nge-5: 56 am
Ijongeka inomdla kakhulu kwaye ndiyithanda ukusukela oko bendicebise, ndiza kuyifunda enkosi kakhulu
Okthobha 23, 2021 nge-9: 58 am
Ndiyavuya kakhulu ukuba ube nomdla. Ndiyathemba ukuba uyayithanda njengoko ndisenza. Kwaye undixelele.
1 Isishwankathelo somsebenzi
2 UAbbe Faria, umenzi
3 Inqaba ye-If kunye neSiqithi saseMontecristo
3.1 Island kunye Castle of Ukuba
3.2 Isiqithi saseMontecristo
4 Umdla wokubhala ngesandla sasekhohlo